အလုပ်လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို ဖြေပြီးသောအခါ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းစာတိုလေးရေးပုံရေးနည်း - Myanmar Network
အလုပ်လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို ဖြေပြီးသောအခါ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းစာတိုလေးရေးပုံရေးနည်း
Posted by Betty on June 16, 2015 at 11:57 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီဆောင်းပါးမှာ အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ ပထမအဆင့် စီစစ်ခြင်းကို အောင်မြင်ပြီး လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းပါ ပါသွားပြီးတဲ့အခါ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ အဆင့်တွေထဲက အင်တာဗျူးခေါ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း စာရေးနည်းကို ရှင်းပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြေပြီး၍ အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း စာတိုလေးကို ချက်ချင်းမရေးပါနှင့်ဦး။ ၎င်းအစားတစ်စုံတစ်ယောက်ကို ၎င်းအင်တာဗျူးအကြောင်းပြောပြလိုက်ပါ။
သင်မှတ်မိနိုင်သမျှ အချက်အလက်တွေကို မျှဝေလိုက်ပါ။ အကယ်၍ သင့်မှာ မေးခွန်းမေးဖို့အတွက် သင်ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကို ရပ်ခိုင်းတတ်တဲ့ တဲ့တိုးပြောတတ်ပြီး အားမနာတမ်းအမေးထူတဲ့ သူငယ်ချင်းရှိနေပါက အဲဒါကအပိုဆုကြေးပဲပေါ့။ သင့်သူငယ်ချင်းရဲ့ တာဝန်က သင်ပြောပြနေတဲ့ အင်တာဗျူး အကြောင်းကို နားထောင်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ဖို့ပါပဲ။
အလုပ်လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကနေ အိမ်ကို ပေါ့ပါးပြီး ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပြန်လာဖို့က လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အင်တာဗျူး နဲ့ ပတ်သက်လို့ ထူးဆန်းနေတဲ့ (သို့) သံသယဖြစ်စရာ ကောင်းနေတဲ့အချက်တစ်ခုခုများ ရှိနေခဲ့ပါက နောက်ကျမှထက် စောစောသိလိုက်ရတာပိုကောင်းပါတယ်။
အင်တာဗျူး အကြောင်းကိုပြောပြီးတာနဲ့ သင့်ရဲ့ အင်တာဗျူးအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းစာတိုလေးကို စရေးလို့ရပါပြီ။ အင်တာဗျူး လုပ်တဲ့သူ တစ်ဦးချင်းကို ကျေးဇူးတင်ဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ တစ်ယောက်ချင်း သူ့အတွက် လက်ရေးနဲ့ရေးထားတဲ့စာတိုလေးအပြင် email စာတစ်စောင်ပါရပါမယ်။ လက်နဲ့ရေးထားတဲ့စာတိုလေးကို အင်တာဗျူး ဖြေပြီး တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်အတွင်းပို့လိုက်ပါ။ ဈေးဆိုင်တွေမှာ အဆင်သင့်ဝယ်လို့ရတဲ့ ခေါက်ချိုးချိုးထားတဲ့ ကတ်ပြားထဲမှာ လက်နဲ့ရေးတဲ့စာသားထဲမှာ အများကြီး ထည့်ရေးလို့ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် အောက်ဖော်ပြပါနမူနာစာအတိုင်းလေး ရေးနိုင်ရင်လုံလောက်ပါပြီ။ သင့်ကို အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တာက Allyson ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဆိုပါစို့။
Acme Explosives မှာ မနေ့က အရောင်းအ၀ယ်ညှိုနှိုင်းရေးမှူးရာထူးနဲ့ပတ်သက်၍ အချိန်ပေးပြီးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ပလတ်စတစ်ပုံသွန်းလောင်းပုံစနစ်အကြောင်း ကောင်းကောင်းသရုပ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လေ့လာရန်အတွက် စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိနေပါတယ်။
သင်နဲ့ interview လုပ်တဲ့သူတစ်ဦးချင်း (ဒီဥပမာမှာတော့ အယ်လီဆန်ပါ) ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ တိကျတဲ့အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကို ဘာကြောင့်စာထဲမှာ ထည့်ရေးရသလဲ ဆိုတာကိုသိပါသလား။ အကြောင်းကတော့ အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ သူတွေက အလုပ်လျှောက်သူအများကြီးနဲ့ စကားပြောပြောရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်လျှောက်ထားသူတွေအားလုံးက သူတို့စိတ်ထဲမှာ ရောနေတယ်။ Allyson ကို သင်ဟာ ဘယ်သူလဲဆိုတာကို သတိမပေးရင် သူက သင့်ကိုမေ့သွားပါလိမ့်မယ်။ သင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကို သူမက အလွယ်တကူနဲ့ မေ့သွားနိုင်ပါတယ်။ အင်တာဗျူး လုပ်တဲ့သူက သင်နဲ့ပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သတိမရမှတော့ ဘယ်လိုလုပ် အလုပ်ခန့်နိုင်ပါမလဲ။
လူတွေက သင်ပြောခဲ့တာထက် သူတို့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကို ပိုပြီးမှတ်မိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် interview လုပ်တဲ့ သူက ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို သင့်ရဲ့လက်နဲ့ ရေးထားတဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်း စာတိုလေးတစ်ခုချင်းမှာ ထည့်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်လက်ရေးနှင့်စာတိုလေးမှာ ရည်ရွယ်ချက်(၂)ခုရှိပါတယ်။
ပထမတစ်ခုကတော့ interviewer ရဲ့စိတ်ထဲသင်ပြန်ရောက်လာရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ခုကတော့ သင်ဟာ ယဉ်ကျေးပျူငှာတဲ့ လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာတိုလေးထက်ပိုရှည်တဲ့ email ကျေးဇူးတင်စာကိုတော့ (၁) ရက်၊ (၂) ရက် စောင့်ပြီးမှ ပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ အကြောင်းအရာကို ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထည့်ရေးရပါမယ်။ သင်နဲ့ အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ဦးချင်းကြားမှာ ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းရာတစ်ခုခုကို ဖော်ပြပြီး ၎င်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သင့်အတွေးကိုချဲ့ရေးပါ။
ထို့ပြင်သင်နဲ့ အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့သူတို့ မဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်း ထည့်ရေးပါ။ Interviewer အနေနဲ့ “ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီး စကားပြောရဦးမယ်” လို့ ကောက်ချက်ချနိုင်မဲ့အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုပေါ့။
အောက်မှာ Allsyon ထံ သင်ရေးလိုက်သော email (နမူနာပုံစံ) ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Thanks again foragreat conversation last Thursday! It sounds like the new Acme Explosives e-commerce site has huge potential and also presentsahost of new issues to be solved. When we launched our first e-commerce site at Angry Chocolates, I negotiated deals with several local shippers that let us save over $10K/month on deliveries to our nearby customers. I'm excited to continue the conversation and learn more about Acme’s plans over the next few weeks.
ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့က ကောင်းကောင်းစကားပြောခဲ့ရသည့်အတွက် ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ။ Acme Explosive e-commerce ဝက်ဗ်ဆိုဒ်ကတော့ ကြီးမားသော အလားအလာကောင်းများရှိသည့်အပြင် ဖြေရှင်းရမဲ့အကြောင်းအရာ အသစ်တွေများမည်ဟု ထင်ရပါသည်။ Angry Chocolates မှာ ကျွန်မတို့၏ ပထမဦးဆုံးသော e-commerce ဝက်ဗ်ဆိုဒ်ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့စဉ် ကျွန်မတို့အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ၀ယ်ယူသူတွေထံပို့ဆောင်မှုပေးသောအခါ တစ်လလျှင် ဒေါ်လာ တစ်သောင်း သက်သာစေရန် ဒေသခံပို့ဆောင်ရေးကုမ္မဏီအချို့နဲ့ သဘောတူညီမှုတွေကို ညှိနှိုင်းခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ပြောလက်စစကားကိုဆက်ပြောနိုင်ရန် စိတ်အားထက်သန်နေသည့်အပြင် နောက်လာမည့်ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အတွင်း Acme’s အစီအစဉ်များကိုလည်း သိလိုနေပါသည်။
Interviewer တိုင်းက သူ့အတွက်လက်ရေးနဲ့ရေးထားတဲ့ စာတိုလေးတစ်ဆောင်စီအပြင် သူရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် စီစဉ်ရေးသားထားတဲ့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း email တစ်စောင်စီကိုလည်း ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်တွေ့ဆုံရတဲ့ လူတွေ့စစ်ဆေးသူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အကြောင်းအချက်အလက်များကို မှတ်စုရေးခြင်းဖြင့် စုစည်းဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သင့်စာရွက်စာတမ်းထည့်သော အိတ်ထဲကို စာရေးစက္ကူစာအုပ်ကလေးထည့်လာခြင်းဖြင့် လူတွေ့ စစ်ဆေးသူ တစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါ သူတို့အကြောင်းကို မှတ်စုမှတ်ယူနိုင်ပါသည်။
Forbes.com မှ Liz Ryan ၏ How To Write A Thank You Note After A Job Interview ဆောင်းပါးကို ကိုးကားဘာသာ ပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော မူရင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာမှာ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
စနစ်တကျ ပုဒ်ဖြတ်ခြင်း (Dot dash dot! By Guy Perring)
လက်ကိုင်ဖုန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ် (Mobile Phone Etiquette)
Permalink Reply by Khin Than Maw on June 16, 2015 at 22:58
Permalink Reply by Aye Nyein Thu on June 17, 2015 at 10:13
Permalink Reply by mudita on June 17, 2015 at 11:36
Permalink Reply by Thidar Kyaw on June 17, 2015 at 18:16
Permalink Reply by ミインチヨ on June 18, 2015 at 3:10
Permalink Reply by Sett Paing on June 19, 2015 at 15:23
Permalink Reply by myinthlaing on June 20, 2015 at 10:23
Permalink Reply by zaw myo aung on June 21, 2015 at 17:11
I want to share this page on facebook.
Permalink Reply by Wutt Yee Aung on October 21, 2015 at 19:57
Permalink Reply by nan phaung noon on March 31, 2016 at 11:23